10ka ciyaar ee Anime ee ugu wanaagsan Android | Androidsis
Ignacio Sala | 08/06/2021 14:00 | Ciyaaraha Android
Tan iyo markii aan xasuusto, waxaan xoqin lahaa timo cirro ah haddii aan timo badan yeelan lahaa, waan ogahay oo xiriir ayaan la yeeshay mawduuca anime, mawduuc ka bilaabmay majaajillo, ayaa loo raray taxane iyo filimaan si loogu sii wado aaladaha moobaylka iyadoo loo marayo ciyaaraha fiidiyowga. Dukaanka Play-ka waxaan ku leenahay tiro badan oo ciyaaro ah oo la xidhiidha mawduucan.
Si kastaba ha noqotee, sida caadiga ah, badankood nama aad bixisay liisanka u dhigma inaad awood u yeelatid inaad si rasmi ah u isticmaasho magacyada jilayaasha, ugu yaraan banaanka Play Store ee Japan (halkaas oo aan ka heli karno ciyaaro badan oo ku saabsan mowduucan) si in badankood goor dhow ama goor dambe ay u dhammaadaan.
Isku dubaridka jirka ee ciyaaraha anime, waxaan kaliya ku darnay cinwaannada ay abuureen shirkadaha in waxay leeyihiin xuquuqda sahaminta sida Sega, Bandai, KonamiTaas oo damaanad qaadeysa haddii aan sameyno nooc ka mid ah maal-gashiga lacageed ee suuqyadan, in aanaan lumin doonin habeennimo.
Hadaad rabto inaad ogaato waxay yihiin top 10 ciyaaraha anime ee Android, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
1 Saamaynta Genshin
3 Saint Seiya Cosmo Fantasy
4 Yu-GI-Oh! Links xafiiltanka
7 Naruto x Boruto Ninja danab
8 Halyeeyada kubbadda cagta
9 Digimon Soo kac
10 Seef Art Online
Mid ka mid ah cayaarihii ugu xiisaha badnaa ee soo gaadhay dhammaan barnaamijyada moobiilka, kombiyuutarada iyo qunsuliyadaha ee 'Genshin Impact', ciyaar durba la gaadhay in ka badan 800 milyan oo doolar iyada oo loo marayo iibsashada ciyaarta marka lagu daro marinka dagaalka.
Cinwaankani wuxuu na barayaa Teyvat, oo ah qaarad aad u wanaagsan oo aan ka helno makhluuqaadka kuwada noolaada isla markaana ay xukumaan 7 Archons, halkaasoo toddobada cunsur ay isugu yimaadaan.
Safarkayagu wuu bilaabmayaa jawaab u raadinta Toddobada, ilaahyada aasaasiga ah ee sahaminaya gees kasta oo ka mid ah cinwaankan adduunka ee furan oo inbadan isbarbar dhiga Legend Of Zelda, cinwaan loo heli karo oo kaliya Beddelka Nintendo.
Saamaynta Genshin ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, kuma jiraan xayeysiis laakiin haddii aad wax ka iibsato gudaha, iibsiyada u dhexeeya 1,09 euro ilaa 109,99 euro oo ah iibsiga ugu qaalisan. Intaa waxaa sii dheer, waxay bixisaa waxqabadka iskutallaabta-badbaadinta, sidaas darteed waxaan sii wadi karnaa inaan ku ciyaarno Xbox-ka ama kumbuyuutarka kumbuyuutarka, laakiin maaha Playstation.
Honkai Impact 3aad waa ciyaar ficil 3D ah oo ay soo saartay miHoYo (abuurayaal lamid ah Genshin Impact) si buuxda 3D qaabka anime iyo gameplay ku salaysan ficil. Ciyaartoydu waxay qabtaan booska Kabtanka Hyperion, oo ah markab dagaal oo duulaya oo uu dhisay Schicksal.
Sida kabtanada, waxaan hogaamineynaa koox Valkyries ah Laanta Bariga Fog ee ololaha toosan. Maaddaama aan nahay maamulayaasha ugu sarreeya ee Valkyries, waa inaan ku hubeynaa Valkyries noocyo kala duwan oo hub ah iyo dhaleeceyn (astaamo xusuus hidde ah) si looga caawiyo inay ka badbaadaan dagaallada ka dhanka ah Honkai, oo ah hay'ad dabiici ah oo loogu talagalay in lagu baabi'iyo aadanaha.
Saameynta Honkay 3aad ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah iibsiyada u dhexeeya 0,89 euro ilaa 99,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 5 ama ka dib waxayna leedahay celcelis qiimeyn ah 4.1 xiddigood 5-ta suurtagal ee ku dhow qiimeynta 300.000.
Bandai wuxuu noo ogolaanayaa inaan dib u xasuusano taxanaha Caballeros of Zodiac.
Sida taxanaha asalka ah, jilayaasha waxay ku sameyn karaan isku xirnaan isbadal bartanka dagaalka, taas oo ka dhigaysa kuwo awood badan. Cinwaankani wuxuu noo oggolaanayaa inaan abuurno koox naga mid ah dagaalyahanno isla markaana aan u ciyaarno qaab sheeko oo daba socda sheekada ugu weyn si aan si qoto dheer uga baranno taariikhda sheekadan.
Saint Seiya Cosmo Fantasy, waa la heli karaa sida bilaash soo dejinta, waxaa ka mid ah iibsiyada u dhexeeya 1,09 euro ilaa 89,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 5.0 ama ka dib.
Yu-GI-Oh! Links xafiiltanka
Koname wuxuu na siiyaa a ciyaarta kaarka isaga waxaan la noqon karnaa midka ugu fiican adduunka. Cinwaankani wuxuu ina tusayaa, talaabo talaabo, sida ciyaartu u shaqeyso iyo awoodda mid kasta oo kaararka ah, sidaa darteed haddii aad waligaa caajis ahayd inaad ku ciyaarto noocyada noocan ah, oo leh Yu-Gi-Oh! Cudur daar ma lihid.
Maaddaama aan guuleysanno cayaaraha, waxaan helnaa marin jilayaal cusub waxaanan helnaa waxyaabo nooc kasta oo aan ku horumarino xirfadaheena dagaalka. Yami Yugi, Seto Kaiba, Jaden Yuki, Yusei Fudo, Yuma Tsukumo oo leh qaar ka mid ah jilayaal badan oo laga heli karo cinwaankan oo leh muuqaalo 3D ah.
In ka badan 2 milyan oo qiimeyn ah oo ku jirta Play Store, ciyaarta ayaa leh celcelis qiimeyn ah 4.3 xiddigood oo ka mid ah 5 macquul ah, ayaa loo heli karaa si bilaash ah, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka, iibsiyada u dhexeeya 1,09 euro ilaa 54,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 5.0 ama ka dib.
Azur Lane waa ciyaar taas isku qas walxaha RPG iyo toogtaha, cinwaan ah aragtida 2D halkaasoo aan ku abaabulayno illaa 6 markab oo ka mid ah maraakiibtayada si aan u burburinno cadowga oo aan u helno dhammaan kheyraadkooda. Cinwaankani wuxuu naga dhigayaa wax ka badan 300 markab, oo mid kasta oo tirakoobyo kaladuwan leh
Luuqda Azur ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, Kuma jiraan xayeysiis laakiin haddii aad wax ka iibsato ciyaarta dhexdeeda, iibsiyada u dhexeeya 1,09 euro illaa 79,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 4.4 ama ka dib waxayna leedahay qiimeyn celcelis ah 4.5 xiddigood 5 macquul ah.
Iyada oo celcelis ahaan lagu qiimeeyo 4,4 xiddigood 5ta macquul ah, Sega wuxuu na siiyaa Shin Megami Tensei, oo ah cinwaanka ' isla abuurayaasha shirkadda 'Megami Tensei franchise' iyadoo in ka badan 30 sano suuqa ku jirtay. Cinwaankan waxaan iska dhigeynaa kabaha Ibliis Download, oo sifiican loogu yaqaan Dx2 waxaanuna awoodnaa inaan u yeedho oo xakameyno jinka.
Shin Megami Tensei wuxuu na barayaa dariiqa Liberators, oo ah urur qarsoodi ah u dagaallama si aad adduunka uga ilaaliso koox ka soo horjeedda Dx2, oo loo yaqaan Acolytes kuwaas oo ku takri-falaya awooddooda si ay u geystaan ​​burbur.
Shin Megami Tensei ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka, iibsiyada u dhexeeya 1,09 euro ilaa 109,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 5.0 ama ka dib.
SHIN MEGAMI TENSEI Xoreynta D × ２
Developer: XARUNTA SEGA
Naruto x Boruto Ninja danab
Ninja Voltage waa ciyaar ficil istiraatiijiyad istiraatiiji ah oo ku saleysan adduunka caanka ah ee ninja ee Naruto oo aan ku korayno kheyraadka tuuladeena, abuur qalcad ninja oo ka difaac weerarada cadowga.
Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa inaan tagnaa weerarka iyo duulaan cadawga ninja qalcado adoo jabinaya shinobi iyo dabinno ay la galaan dagaalyahanadaada ugu adag ee ninja iyo ninjutsu. Samee ninja combos, ku dilo cadawgaaga noocyo badan oo weerar Ninjutsi ah, ku kasbo abaalmarin dagaal kasta ...
Cinwaankan gadaashiisa waa Bandai, oo ah shirkada xaq u leh Naruto, sidaa darteed cinwaankani wuu baaba'idoonaa habeenki sidii inuu ku dhaco kuwa kale oo badan. Naruto x Boruto ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, kuma jiraan xayeysiis laakiin haddii aad ka iibsato app-ka, iibsiyada u dhexeeya 1,09 euro ilaa 89,99 euro.
Halyeeyada kubbadda cagta
Mid kale oo ka mid ah cinwaannada la xiriira anime ee laga heli karo Play Store-ka illaa Bandai, waxaan ka helaynaa Halyeeyada Kubadda Cagta, ciyaar door-ciyaar ciyaar ficil ah leh sawirro iyo animations 3D oo noo sheegaya sheekada asalka ah ee ku saleysan dabeecadda quraafaadka ee Akira Toriyama.
Cinwaankan waxaan ku haynaa qashinkeena Goku, Krillin, Piccolo, Vegeta, Trunks iyo dhamaan astaamaha taxanahan sheeko xariirka ah. Waxay na siisaa kontaroolo aad u macquul ah iyo weerarada waxay ku saleysan yihiin kaararka, sidaa darteed haddii aad raadineyso ciyaar ficil ficil saafi ah, kani maahan cinwaanka aad raadineyso.
Legends Dragon Ball Legends ayaa diyaar u ah adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash waxaana ku jira wax ku iibsiga gudaha-abka oo u dhexeeya 1,09 ilaa 89,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 6.0 ama ka dib iyo in ka badan hal milyan oo qiimeyn ah, waxay leedahay qiimeyn celcelis ahaan ah 4.3 xiddigood.
DRAGON BALLO LAGU HELO
Digimon Soo kac
In DIGIMON Rearise wuxuu na siiyaa sheeko gebi ahaanba ka duwan meesha aan ka heli karno jilayaal cusub. Cinwaankan la soco sheekada Tamers iyo Digimon markay korayaan oo ay xoojinayaan xiriirkooda saaxiibtinimo.
Waxaan u abuuri karnaa koox Digimon caado u ah muujiyaan awoodeena dagaalada waqtiga-dhabta ah ilaa 5v5 ee Beerta dagaalka. Hadaad jeceshahay Digimon iyo ciyaaraha doorka, hubaal waad ku raaxeysan doontaa cinwaankan cusub ee la soo saaray, sida kuwii hore, ee Bandai.
Digimon ReArise, ayaa loo heli karaa adiga si bilaash ah u soo dejiso, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada gudaha-app-ka oo u dhexeeya € 1,09 ilaa € 89,99. Waxay u baahan tahay Android 5.0 ama ka dib waxayna leedahay celcelis qiimeyn ah 4 xiddig oo ka mid ah 5 macquul ah.
Cinwaankan oo wax kale ku marti qaadaya, Bandai wuxuu na siinayaa a doorka ciyaarta taas oo aan nahay halyeeyada sheekada anagoo xubin ka ah koox weerar ah oo xayiran waana inaan gaarno dabaqa 100-aad ee Aincrad si aan nafteenna u xoreyno.
Ciyaartan ayaa nagu casuuntay la shaqayso kooxaha kale ee weerarka si aan uga adkaanno wuxuushyada xoogga leh iyo dhammaystirka hawlgallada noo oggolaanaya inaan helno abaalmarinno aan ku horumarinno hubkeenna, helno xirfado cusub, aan ku baranno qaababka weerarka ...
Seef Art Online ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, kuma jiraan xayeysiis laakiin haddii aad iibsato barnaamij ku kacaya min 1,09 euro ilaa 89,99 euro. Waxay u baahan tahay Android 5.0 ama ka dib waxayna leedahay qiimeyn celcelis ahaan 4,5 xiddigood 5 macquul ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Top 10 Ciyaaraha Anime ee loogu talagalay Android
10-ka barnaamijyadood ee il furan ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android